စာရင်းပြုပါရန်နှိုးစက်နှင့်အတူသတိပေးမှု, | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » စာရင်းပြုပါရန်နှိုးစက်နှင့်အတူသတိပေးမှု, နေ့စဉ်သတိပေးချက်
စာရင်းပြုပါရန်နှိုးစက်နှင့်အတူသတိပေးမှု, နေ့စဉ်သတိပေးချက် APK ကို
သတိပေးချက်များသတိပေးချက် app ကိုသုံးစွဲဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါသည် - သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပြသထားတယ်နှင့်ဘာမျှမပို။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်မေ့လျော့စေခြင်းငှါစိုးရိမ်တယ်ဆိုရင်ပဲအချိန်လာ, သင့်အလုပ်များကိုနှင့်အစီအစဉ်များကိုသင့်ရဲ့ device ကိုမှတွန်းပါလိမ့်မည်သည့်အခါတစ်ဦးသတိပေးခကျြ, ထား. , ဒါဟာတပြင်လုံးကို Google Play အတွင်းရှိနှိုးဆော်သံနှင့်အတူအကောင်းဆုံးသတိပေးချက် app ကိုဖွင့်! ★ ထောက်ခံသတိပေးချက်★
ဆေးဝါး / ဆေးပြား, ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်, အရေးကြီးခေါ်ဆိုမှုများ, မွေးနေ့ပွဲ, နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့်အများအပြားပိုပြီးရိုက်ခြင်း Daily သတင်းစာ todo လုပ်ငန်းများ, အစည်းအဝေးများ, စီးပွားရေးချိန်း, - ကျနော်တို့သတိပေးသင်သည်တတ်နိုင်ကူညီပေးသည်။
✔Deadlines - ရုံချင်းစီနောက်ဆုံးနေ့များအတွက်သတိပေးချက်ဖန်တီးနှင့်သင်၏အလုပ်နှင့်အတူလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆက်နေ
✔Meetings - သင်သည်သင်၏ client များနှင့်အတူမဆိုအရေးကြီးသောအစည်းအဝေးများကိုပျောက်ဆုံးပါသလား? သငျသညျအစည်းအဝေးအချိန်ဇယားကိုသတိပေးထားတဲ့ဒီ app ကိုစမ်းကြည့်ပါကလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသတိပေးလာ။
✔Birthdays - ဒါဟာအပေါငျးတို့သမိတ်ဆွေများက '' နှင့်မိသားစုရဲ့မွေးနေ့မှတ်မိဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သတိပေးချက်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်ဦးချင်းစီအချိန်တစ်ခုမွေးနေ့ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်သည်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
✔Anniversaries - လာမည့်အရေးကြီးသောနှစ်ပတ်လည်မေ့လျော့ဘယ်တော့မှမ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏သတိပေးချက်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အရေးကြီးသောရက်စွဲများပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုဆန္ဒရှိနိုင်ပါတယ်။
စာရင်းထဲမှာ✔Shopping - သင်ယခုပိုက်ဆံကယ်တင်နှင့် smart device အတွက်တစ်ဦးစျေးဝယ်စာရင်းတွင်အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်သငျသှားနှင့်ဘယ်တော့မှဘာမှမေ့စိုးရိမ်ဖို့လိုအပ်လေရာရာ၌သင်တို့နှင့်အတူအယူနိုင်ပါတယ်။
ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူဖုန်းခေါ်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့အရေးကြီးသောအရာများကိုသတိပေးပါ - ✔Importantတောင်းဆို
ဆေးဝါး✔Taking - သင်တစ်ဦးဆေးဝါး add ဆေးပြားယူပြီးများအတွက်သတိပေးချက်များရနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ခြေရာခံခြင်းခံနိုငျ
•ထပ်ကျော့ / ထပ်နေသည့်ပွဲများလုပ်ငန်းများ
•အလိုလိုတာဝန် / သတိပေးချက်ဖန်တီးမှု
အဆိုပါထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ်ထုံးစံတာဝန်များကို / သတိပေးချက်များထပ်မဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးရန်•နိုင်ခြင်း
5.33 ကို MB